Cunsuriyiinta waqooyiga Yurub oo banaanbax ku qabsanaya magaalada Borlänge, Sweden – fogaanarag
Cunsuriyiinta waqooyiga Yurub oo banaanbax ku qabsanaya magaalada Borlänge, Sweden
Koox Cunsiriyiin ah oo aaminsan afkaartii Naasiyiintii Germalka ayaa ogolaansho u helay in banaanbax ay ku qabsadaan Magaalada Borlänge, gobolka Darlarna ee Dalka Sweden.
Banaanbaxaan oo ah mid ay ku muujinayaan dareenkooda cunsurnimada ah ee ay ugu soo horjeedaan soo galootiga ayay ku soo beegeen maalinta May Day oo ah maalinta shaqaalaha Adduunka ee 1,da May, iyadoo laga cabsi qabo in dibad baxooda uu sababo rabshado ay la galaan asxaabta garabka bidix iyo kuwa cunsuri diidka oo iyana loo ogolaaday in ay sameeyaan banaanbax kale oo dhan ah Cunsuriyadda.
Afhayhayeen u hadlay Booliiska Magaalada Borlänge Stefan Dangardt ayaa sheegay in Booliiska oo kaashanaya Maamulka Magaalada ay waqti hore isu diyaariyeen sida ay u qabsoomi karaan banaanbaxyadaan iyadoo wax dhib ah uusan ka dhicin Magaalada, qaar ka mid ah wadooyinka Magaalada ayaa la xirayaa oo loo weecinayaan wadooyin kale waxaana la mamnuucayaan in diyaarado ay maraan hawada Magaalada ayuu yiri.
Kooxdaan oo lagu magacaabo Nordic Resistance Movement ama dhaqdhaqaaqa iska caabinta Nordic ayaa ah xagjiriin garabka midigta oo ka dhisan dalalka la isku yiraahdo Nordic waxaana ay horey u sameeyay rabshado cunsuriyeed.
2013 ayaa xubno ka tirsan xagjiriintaan ay weerareen dibadbaxayaal ka soo horjeeday cunsuriyada ay aaminsan yihiin oo isugu soo baxay magaalada ku taalada dulleedka Stockholm ee Kärrtorp, hadana waxaa jira cabsi laga qabo in axadaan ay Borlänge ka gaystaan weerarkaas oo kale maadaama kooxaxa diidan Cunsuriyada ay qorsheysteen banaanbax ay kaga soo horjeedaan ficiladooda oo dhacaya isla maalinkaas.
Xisbiyada Socialka iyo bidixda oo kaashanaya hay,adaha aanan dowliga aheyn iyo kooxada ka soo horjeeda cunsuriyada ayaa iyana haysta ogolaansho ay ku mudaaharaadaan isla maalinta axada 1 da May.
Waxaana la filaa in Magaalada ay ka dhacaan dibad baxyo is diidan oo socdaalo kale duwan ay ku marayaan wadooyinka Magaalada iyagoo qudbado ka jeedinayo goobo kale duwan oo loo sii qorsheeyay.
Shaqada ugu weyn ee booliiskana waa in ay kala ilaaliyaan dibad baxayaasha oo la malaynayo in ay isku dhacayaan haddii ay ku kulmaan meel qura ah.
Borlänge waa Magaalo Warqshadeed ku taalla Gobolka Dalarna ee Bartamaha Dalka Sweden waxaana ku dhaqan 50,000 oo Qof, taariikh ahaan waxaa ku xoog badnaan jiray maamulkeeda xisbiga shaqaalaha balse tobonaankii sane ee ugu dambeeyay waxaa shiiqiyay xisbiga Social Democrats.